Numa, oke mmiri ozuzo na-adịghị ahụkebe, dị nso na Gris na Sicily | Netwọk Mgbasa Ozi
Numa, ajọ ifufe a na-adịghị ahụkebe, dị nso na Gris na Sicily
Oké Osimiri Mediterenian na-ekpo ọkụ nke ukwuu n'afọ a enweela nkwado nke ikuku a na-adịghị atụ egwu a na-akpọ Numa onye gbuela mmadụ iri na ise na mpaghara Attica, na ọdịda anyanwụ nke Atens, nke ahụ nwere ike ibute oke mbibi na ụbọchị ndị na-abịanụ.
Typedị ụdị ifufe Mediterranean, nke a maara dị ka medicanes, Ha bụ ihe omume ndị anaghị adịkarị, ma mgbe ha mere, ha nwere ike bụrụ ihe mbibi dịka ajọ ifufe ahụ rutere n'ụsọ oké osimiri nke America ma ọ bụ Eshia.
1 Gini bu ogwu?
2 Kedu ihe ga-esi na Numa pụta?
3 Ọ ga-ezo na Spain?
Gini bu ogwu?
Ọgwụ bụ okwu bilitere site n'okwu ndị bụ Mediterráneo na Huracán (ajọ ifufe na Bekee). N'agbanyeghị nke ahụ, ha ekwesịghị inwe mgbagwoju anya n'ihi na isi nke oké ifufe Mediterranean bụ ikuku oyimgbe nke oké ifufe ikuku. Ya mere, ọ bụ oke mmiri ozuzo na-adịghị ahụkebe, nke na-eri na okpomọkụ nke azụkọtara oke osimiri.
Kedu ihe ga-esi na Numa pụta?
Numa, n'ihi nchikota nke oyi oyi nke isi ya na mmiri dị ọkụ nke Mediterenian, na-ahapụ mmiri ozuzo. Ọzọkwa, Ọ ga-esonyere ya site na ifufe nke ifufe nwere ike sie ike, nke kilomita 200 kwa elekere malite na Tọzdee, na-eru ọtụtụ awa na-ekwo ekwo na Saturday na Sunday.
A na-atụ anya mpaghara kachasị emetụta n'etiti Oke Osimiri Ionian na Southern Balkans, ebe enwere ike ịdekọ ihe ruru 400 millimeters nke mmiri a kwakọbara (1 milimita nke mmiri ozuzo nhata 1 lita mmiri kwa m2). Agbanyeghi na omebego nnukwu mbibi: mmadụ iri na ise anwụọla ma ọtụtụ mmadụ efuola. Si ebe a, anyi nwere olile anya na onu ogugu ndi a adighi abawanye.
Ọ ga-ezo na Spain?
Ebe a na Spain anyị na-ebi otu n'ime ụkọ mmiri ozuzo kacha njọ n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ. O di nwute, Ala mmiri nke Iberian ma ọ bụ nke Balearic ma ọ bụ nke Canary agaghị enweta otu ndapụ nke Numa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Numa, ajọ ifufe a na-adịghị ahụkebe, dị nso na Gris na Sicily
Nzukọ Bonn Climate Summit 2017 na-akwụsị (COP23)